I-Semalt Expert Talks Mayelana Ne-Wave Yokudlulisa Ugaxekile Ukuphulukisa idatha ye-Google Analytics
Uma uqaphela ukuthi eziningi zokudlulisa izimoto ziza ku-Google Analytics yakho, kufanele ukhathazeke njengoba abahlukumezi bezama ukweba imininingwane yakho kanye nemininingwane yesayithi. Ochwepheshe bezobuchwepheshe baye basihlinzeka ngezeluleko eziningi, amacebo, kanye nokusikisela kokuthi ungasusa kanjani ugaxekile wokudluliselwa. Babeke izindlela eziningi zokulwa nazo futhi basikisela izixazululo ezingase zibe khona zokucubungula.
Lezi zinsuku, eziningi zezingxube zokuthunyelwa kogaxekile zilimaza idatha ye-Google Analytics. Kuyindaba yokukhathazeka okukhulu kwabasunguli bewebhu kanye nabanikeli bamawebhusayithi. Ukuhlaselwa kunika kakhulu imibiko yokudlulisela emgwaqweni futhi kulimaza izakhiwo ze-Google Analytics kakhulu. Ngeke kube yiphutha ukusho ukuthi lokhu kungenye yezinkinga ezinkulu kulabo abanikazi nabancane bhizinisi.
Ngeshwa, ayikho indlela yokuqeda ukugaxekile kogaxekile, kodwa amathiphu alandelayo, okushiwo ngu-Artem Abgarian, iMenenja yeMpumelelo YokuPhepha kwamakhasimende Semalt , ingavimbela ukufika kwawo ngezinga futhi lingagcina iwebhusayithi yethu iphephile futhi ivikelwe.
Abahlaseli abadala i-Google Analytics ogaxekile
Umbuzo lapha ukuthi kungani futhi abahlaseli benza kanjani ugaxekile we-Google Analytics? Kubaphathi bewebhu, ukuthola impendulo yalo mbuzo akuyona enzima kakhulu. Bangakwazi ukuhlola imininingwane ye-Google Analytics yabo futhi bahlole uma amasayithi abo ethola imoto engafanele..Kubalulekile kumnikazi wewebhusayithi ukuthi akhiqize ithrafikhi yomuthi kwisayithi lakhe. Ugaxekile wokudluliselwa kusetshenziselwa abaduni ukukhiqiza ithrafikhi engavamile nokukhohlisa. Ukuthengiswa kanye nokuhola kwezinhlelo zokudluliselwa kuzo akuhle lutho. Abaduni basebenzisa la maqhinga kuphela ekusakazeni amagciwane, i-malware, nokuqhuba ukuhlaselwa kwabo ngobugebengu. Ngakho-ke, uma ubona ukuthi isayithi lakho lithola imoto esolisayo emithonjeni engaziwa, kufanele uthathe izinyathelo ngokushesha.
Ugaxekile lokudluliselwa kwenzeka kanjani?
Manje sizokutshela ukuthi ukugaxekile kogaxekile kwenzeka kanjani? Abaduni abaningi bahlasela amasayithi akho bese beba idatha yakho usebenzisa i-bots. Abanye babo baze basebenzise izinhlobonhlobo zamabhodnethi ukukhohlisa inani elikhulu labantu. Abanye abahlaseli baze bavelise ama-hits amafake kanye nokubukwa kwemoya ukuze bahlanganyele abaphathi bewebhu abengeziwe. Ngenxa yalokhu, bathumela i-bots kusayithi lakho bese bazama ukuyikhombisa lapho uthola ithrafikhi ephilayo. Abahlaseli abanjalo bagijima Abaculi be-Google Analytics kanye nezikripthi ze-Java ukuqoqa idatha kusuka kumaseva wakho. Bese basebenzisa le datha ngemisebenzi yokukhwabanisa.
Siyazi ukuthi i-Google Analytics ingenye yemikhiqizo enokwethenjelwa, eyiqiniso, neyaziwa kahle eyenziwe ukuqinisekisa ukuphepha nokuphepha kwamawebhusayithi. Ungakwazi ukulandelela ukuthi yikuphi ukubukwa okuyingqayizivele isayithi lakho lisebenzisa i-Google Analytics namanye amapulatifomu afanayo. Ikhodi kufanele ifakwe kusayithi lakho ye-Google Analytics ukuze isebenze. Le khodi ivame ukubiwe ngabaduni njengoba kulula ukuqagela futhi ingasetshenziselwa imisebenzi yabo engekho emthethweni.
Kuyacaca kuwo wonke ama-webmaster ukuthi i-Google Analytics ivumela izakhiwo ezingamashumi amahlanu ku-akhawunti eyodwa. Yonke impahla ine inombolo yayo ethize ye-serial. Njenge-webmaster, kuwumsebenzi wakho ukwenza le namba ye-serial ibe nzima noma ayikwazi ukuqagela. Ungashintsha ngokuvakashela ikhasi lakho lezilungiselelo.